SANAD GUURADII 60 naad EE URURKA SANU [SOMALI AFRICAN NATIONAL UNION] EE BANAADIRIGA OO LAGA XUSAY MOMBASA EE DALKA KENYA
waxaa xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacay Dalka Kenya magaalada Mombasa xafladaas oo ay soo abaabuleen wax garadka iyo odayaasha ku dhaqan magaalada Mombaasa ee dalka Kenya ee ku saab saneeyd sanad guuradii 60 naad ee ururka siyaasadeedka Banaadiriga ee SANU - Somali African National Union.
Xafladaas oo ay ka soo qeyb galeeyn qaar ka tirsan madaxda sare ee ururka SANU oo lagu casuumay in uu kala qeyb galo maalintii la aas aasay oo ah 15 april oo lixdan jirsatay ururka SANU.
ugu horeyntii waxaa furitaanka xafladda lagu furay aayado qur'aan ah iyo dar daaran waxaana halkaasi ka soo jeeydiyay shariif Amiin baxasan,sidoo kale waxaa asana qudbad soo dhaweyn iyo xogwareeysi halkaasi ka soo jeydiyay Prof.Dr. Shariif Maxamed Xasan,wuxuu aad iyo aadba ugu dheeraaday muhiimada midnimadu ay leedahay waxaana sidoo kale asagana magarafoonka ku soo dhaweeyay Gu'doomiye ku xigeenka SANU Dr. Abdulkadir Xaaji Sufi (muriidigolf) waxaa qudbad dheer ka soo jeediyay munaasabada sanad guurada 60aad ee 15 April 2003. ee SANU .
Muriidi golf wuxuu hadalkiisa ku bilaaway waxay iitahay farxad in maanta aan idila qeyb galo SANU oo lixdan jirsatay iyo sida diiraneyd ee aad igu soo dhaweyseen magaalada mombasa ee dalka kenya.
wuxuu xusay ururkii HYC [Hamar Youth Clup] oo ahaa xisbigii ugu horeeyay ee laga as aaso Somaaliya Gaar ahaan magaalada mugadishu waxaana hoosta ka xariiqay qiimaha iyo qadarinta ay u leedahay Reer Banaadir xisbigaasoo marka danbe isu badalay UGB [unione Govone Banadir].ilaa ugu danbeen isu badalay SANU [Somali african union] oo maanta ugu wakiil ah Shirka dib u hashiisinta Soomaaliyeed ee Nairobi Dalka Kenya .
ugu danbeentii wuxuu u rajeeyay Dhamaan Bulsha weeynta Banaadiriga Midniimo Hurumar iyo guul in ay ku waaraan asaagoodana wax ay la qeyb sadaan.
dadka ka soo qeb galay xafladaasi hadaan idiin so koobno waxay kalayahiin .
Prof, Dr.Shariif Maxamed Xasan
Sayid Bakar Muqtaar
Shariif maxamed axmed Abow
Sharafoow Abu Xawad
Iman Nur iman
C/qaadir maxamed Yasiin (AARKI)
Amiin Shariif Baaxasan
Sujaac Suufi (AAsaawoow)
Yaxye Cusmaan Yuusuf
Baash Xabiib abanuur
Dr. Caamir Cali
Cusmaan Sheikh Abuukar
Abuukar maxamed Xaaji (AMASH)
Shariif Haashim Sh Xasan.
Faafin: SomaliTalk.com | April 13, 2003
Magaalada Muqdisho, caasimaddii dalka Soomaaliya, hoygii nabadda iyo amaanka, x adaaradda iyo tacliinta... hadda waxay noqotay GUJI... Agoosto 6